Nails Art Tutorials – Yay Thu Ma
Category: Nails Art Tutorials
လက်သည်းရဲ့ အလှပဟာလည်း အမျိုးသမီး တို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အလှပတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်သည်း တွေ မကြာခဏကျိုးလို့၊ လက်သည်းမကြာခဏ ပဲ့နေတတ်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် မိမိ အိမ် မှာ လက်သည်း ကို အလွယ်တကူ ဂရိုစုက်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ လက်သည်း အရမ်းရှည်လာရင် ညှပ်လိုက်ပါ လက်သည်း အရမ်းရှည်ရှည်ထားတာဟာ သင့်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လက်သည်းအရမ်းအရှည်မထားဘဲ ပုံမှန်လေး ညှပ်ပေးရပါမယ်။ ညှပ်တဲ့အခါမှာလည်း လက်သည်း ကို...
နာမည်ကသာ လက်သည်းနီဆိုးဆေးပါ။ သူက ဒီနေ့ခေတ်မှာ အနီရောင်တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင့်စိတ်ကူးထဲက အရောင်တွေအကုန် လက်သည်းဆိုးဆေးတွေ ရှိလာပါပြီ။ သင် အင်္ကျီ ဘာအရောင်ပဲဝတ်ဝတ် အင်္ကျီအရောင်နဲ့လိုက်ပြီးဆိုးဖို့ လက်သည်းဆိုးဆေးတွေ အရောင်စုံ ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဘီစီ ၃၀ဝ၀ လောက်က တရုတ်ပြည်မှာ လက်သည်းဆိုးဆေးတွေ စတင်အသုံးပြုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဆို အထက်တန်းလွှာတွေကသာ လက်သည်းဆိုးဆေး အရောင်ရင့်တွေ ဆိုးခွင့်ရတာဖြစ်ပြီး သာမန်လူတွေက အရောင်ဖျော့တွေပဲ ဆိုးခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လက်သည်းဆိုးဆေးတွေကို...
အမျိုးသမီး တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အသုံးဝင်ဆုံး လက်သည်း ဆိုးနည်း လေးတွေ
အမျိုးသမီး တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အသုံးဝင်ဆုံး လက်သည်း ဆိုးနည်း လေးတွေ ………… 1. အသုံးပြုခြင်း လက်သည်းနီ ဆိုးတဲ့အခါ သင့်လက် အရေပြား ကို လက်သည်းနီ မပျံ့နှံချင်ဘူးဆိုလျှင် Vaseline ကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ၀ါဂွမ်းတံ တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လက်သုတ်ပ၀ါတစ်ခုနှင့်အတူ vaeline သုတ်ပြီး ပိုလျှံနေတဲ့ လက်သည်း ဆိုးဆေး တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ 2. လက်သည်း ဆိုးဆေး ကို...
အရက်ပျံ နဲ့ သတင်းစာ ကိုသုံးပြီး လက်သည်းနီ ခပ်လန်းလန်းဆိုးမယ် ..!
အရက်ပျံ နဲ့ သတင်းစာ ကိုသုံးပြီး လက်သည်းနီ ခပ်လန်းလန်းဆိုးမယ် လက်သည်းနီ ကို ပုံမဖော်တတ်လို့ စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ ကိုယ့်နားမှာ သတင်းစာ စက္ကူ နဲ့ အရက်ပျံ ရှိရင် လက်သည်းနီ ခပ်မိုက်မိုက်လေး ဆိုးလို့ရပါပြီ။ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အလှအပလို့ ဆိုရာမှာ လက်သည်းနီဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်း ချန်ခဲ့လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း လက်သည်းနီ အကြည် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လက်သည်းနီ အရောင်တစ်မျိုးမျိုး...
Beauty Tips / Nails Art Tutorials
Spa ကို သွားစရာမလိုဘဲ ခြေထောက်လေးတွေ သန့်စင်ဝင်းပနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
သင့်ခြေထောက်လေး ဖြူဖွေးသန့်စင်ပြီး ပိုမို လှပလာအောင် အိမ်မှာပဲ ပြုလုပ်လို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာပြီး အမှန်တကယ် ထိရောက်ပါတယ်။ လှပကျော့ရှင်းပြီး ဝင်းပတဲ့ ခြေထောက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ အချက်လေးတွေ အတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင့် (၃) ဆင့်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ (၁) ခြေသည်း နှင့် ခြေထောက်များ ကို သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း ဝါဂွမ်း အနည်းငယ်ကိုယူပြီး လက်သည်းဖျက်ဆေး...